1.500 milyan waa tirada qalabka firfircoon ee Apple yeelan doonto bilo yar gudahood | Wararka IPhone
1.500 milyan waa tirada qalabka firfircoon ee Apple yeelan doonto bilo yar gudahood
Wax soo saarka Apple marwalba waxaa lagu gartaa isagoo leh mudo dheer oo la isticmaalo sanado badan. Marka laga reebo in yar mooyaane, iphone waxay leeyihiin celcelis ahaan 5-sano oo cusbooneysiin ah, sida iPad-yada oo kale, in kastoo haddii aan ka hadalno Mac, celceliska ayaa kordha.
Adkaysiga badeecooyinka Apple waxaa loo arki karaa inay tahay mid aan faa'iido u lahayn shirkadda, hase yeeshee sannad kasta way sii deyneysaa astaamaha qaarkood waajib ku ah isticmaalayaasha inay cusboonaysiiyaan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa, sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay, inaad ku haysato suuqa in ka badan 1.500 bilyan oo qalab firfircoon oo shaqeynaya.
In kasta oo iibinta iPhone ay hoos u dhacday sanadkii la soo dhaafay, suuqa gacan labaad waa mid firfircoon macno ahaan, mahadnaqa cusbooneysiinta ay soo bandhigtay shirkadda, sidaas darteed qiimaheeda marwalba wuu ka sarreeyaa inta kale ee boosteejooyinka dhammaadka-sare leh, sida ku dhacday kuwa ay soo saareen labada Samsung iyo Huawei.
Imaatinka iPhone-ka ee dalalka soo koraya sida Hindiya, ma noqonin mid miro dhal ah sidii Apple ay rajeyneysay, si kastaba ha noqotee, in kasta oo iibku uusan aad u sarreeyn, dhaqdhaqaaqaani wuxuu u oggolaanayaa Apple inay gaarto tiro badan oo macaamiil ah. Hindiya waa waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunka, oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.200 bilyan oo qof, iyo wuxuu leeyahay awood koritaan aad u weyn.
Haddii aan ka hadalno Mac, cusbooneysiintu waa ka badan tahay. Sannadkii hore, markii la sii daayay macOS Mojave, Apple wuxuu ka tagay qof walba iyada oo aan wax cusbooneysiin ah. Macs oo la iibiyay kahor 2012, oo bixisa 6 sano oo taageero rasmi ah, maaddaama ay suurtagal tahay in lagu dhejiyo nuqulkan aalado duug ah, in kasta oo hawshu aysan ahayn mid aad u adag, haddana xoogaa waa hawl badan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » 1.500 milyan waa tirada qalabka firfircoon ee Apple yeelan doonto bilo yar gudahood
Waa hagaag, ku dhowaad wax kasta oo la yiraahdo, Apple mar dambe ma xiiseynayo iibinta iPhone, waa iska cadahay in uusan hoos u dhigi doonin qiimaha, iibinta qaar ka mid ah kuwa cusub ayaa durba faa'iido leh, hadda waxaan rajeynayaa inay dhaqdhaqaaqa si fiican ugu qabtaan adeegyadooda, wax waa in la joogaa, maxaa yeelay sidoo kale way iska cadahay in Android aysan waligeed ku gaari doonin kootada
Apple wuxuu ku darayaa nooc cusub nooc kala-saarid barnaamijka Podcast-ka ah